Mamaly ny filan’ny mpamatsy vola ny ACDM | NewsMada
Mamaly ny filan’ny mpamatsy vola ny ACDM
Namoaka ny andiany Sahy ny eo anivon’ny ESDES, omaly tetsy Antanimena. « Mirona sy mamaly ny filan’ny mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombona antoka amintsika ny eto anivon’ny fikambananay sy ny sekoly ambony ESDES. Fepetra takian’izy ireo ny fahaizana mandrindra sy mitantana tetikasa. Tanjona ny ahafahan’ireo mpiofana eto ireo, miasa eny anivon’ireo fikambanana tsy miankina na koa fikambanana eto an-toerana sy avy any ivelany, misahana ny tetikasa ho an’ny fampandrosoana », hoy ny filohan’ny ACDM, Hanitriniaina Elea Chilo. Nanteriny fa iantohan’izy ireo ny fahazoan’ireo mpianatra manaraka fiofanana amin’ny ONG na fikambanana sy orinasa koa.
Fananganana sy famoronana tetikasa
Nambarany fa natao hanamafisana ny traikefa sy ny hanohizan’ireo mpiofana izany eny anivon’ny sehatra iasany ny fiofanana nomena azy ireo, nandritra ny herinandro. « Tafiditra ao anatin’izany fanofanana izany ny fananganana na famoronana tetikasa. Eo koa ny fanaraha-maso ary koa ny fanadihadiana ny mety hampahomby na tsia ny tetikasa… Mba ho mpitantana tetikasa izy ireo. Efa nisy ny fampiharana avy hatrany nataon’ireo mpiofana momba izany fa tsy eny ambony latabatra fotsiny », hoy ihany izy.
Notsiahiviny rahateo fa miasa ho an’ny fampandrosoana maharitra ny ACDM ary mivelatra eo amin’ny tontolon’ny toekarena sy ny sosialy : fanabeazana sy fahasalamana ary koa ny fiarovana ny tontolo iainana izany.
Ireo efa manana traikefa
Ahitana mpiofana efa miasa sy mpisehatra amin’ny amin’ny asa samihafa ny mpiofana satria tafiditra ao anatin’izany fampiofanana izany koa ny momba ny fitantanana ny mpiasa. Ao ireo efa manana traikefa na koa mbola mpianatra. Misy teratany vahiny, Kaomorianina 40 ireo mpiofana, ankoatra ireo teratany malagasy 40 hafa koa. Notolorana ny mari-pankasitrahana avokoa izy rehetra ireo ary natrehin’ny solontenam-panjakana izany lanonana tsotra izany.
Tsiahivina fa efa miditra amin’ny andiany fahafolo, navoakan’ny ESDES ny andiany Sahy ary efa hiditra tsy ho ela koa ny andiany manaraka.